Soo-saaraha Shiinaha Soo-saarista Joojinta Isku-xirka Sare iyo Soo-saaraha | Histe
Fiyuus ka baxa wuxuu ka kooban yahay taageerooyinka insulatorka iyo tuubada fiyuuska. Xiriirada istiraatiijiga ah waxay kuxiran yihiin labada dhinac ee taageerada insulatorka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaaqa waxaa lagu rakibay labada daraf ee tuubada fiyuuska. Tuulada fiyuusku waxay ka kooban tahay tuubbada arc-deminta, tubbada warqadda isku-dhafka ah ee 'phenolic compound tube' ama tubbada dhalada ee epoxy.
Fiisooyinka ka tagista foornada
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Faahfaahinta qaar ayaa lagu dalban karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
1.dhowrista ilaalinta waqtiga dheeriga ah.
2. qaab casri ah iyo iswaafajin.
3. xoog farsamo sare.
Xaaladaha Adeegga Deegaanka
1. Xaaladaha adeegga caadiga ah: heerkulka cimilada oo aan ka sarreyn + 40 darajo, oo aan ka hooseyn -40 darajo;
Joog aan ka badnayn 1000m;
Xawaaraha ugu sarreeya ee dabaysha waa inuusan ka badnaan 35m / s;
Dhulgariirku kamuu xoog badnayn 8 darajo.
Badeecada laguma dabaqi karo meelaha soo socda:
Meelaha halista ugu jira gubashada ama qarxinta;
Meel gariir xoog leh ama saameyn leh;
Qulqulka korantada, tallaabada gaaska kiimikada iyo aagga ceeryaanta milixda wasakhda daran.
Fuse Cutout with Porcelain Base inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo khadadka qaybinta iyo kuwa wax kala beddela ee ka soo horjeeda culeyska xad dhaafka ah iyo dhaawaca wareegga gaaban. Waxa kale oo ay noqon kartaa badhanka ka-goynta xagga kore iyadoo la adeegsanayo aalad xamuul-jabis la qaadan karo. Qalabka fiyuuska ayaa la sameeyay si loo waafajiyo xaaladaha adeegga iyo codsiyada caadiga ah waana uu dhaafay imtixaanka nooca shaybaarka KEMA.
Nooca Danab lagu qiimeeyay
(KV) Xilligan la qiimeeyay
(A) Qalabka wareegga
awood 3-waji (MVA) Jebin max
hadda (KA) In ka badan danab maya
(H) RWX10-35 / 0,5 35 0.5 2000 28 In ka badan 2.5 jeer
(H) RWX10-35 / 3 35 3 2000 28 In ka badan 2.5 jeer
(H) RWX10-35 / 5 35 5 2000 28 In ka badan 2.5 jeer
Hore: Kuleylka kuleylka kuleylka ah ayaa joojinaya joojinta fiilada
Xiga: Iskudhafka Waxsoosaarka Shiinaha Iskutallaabta Iskutallaabta